Akhriso:-Maxeey Baarlamaanka Soomaaliya kala socdaan Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya? – Kalfadhi
February 20, 2019 Kalfadhi
Waxaa jira Khilaaf culus oo u dhaxeeya Wadamada Soomaaliya iyo Kenya kaas oo saameeyay Ganacsiga Kenya kadib markii ay Ganacsatada Qaadka ee Soomaaliya ku dhawaaqayn in ay joojiyeen qaadkii uga imaan jiray dalkaasi.
Baarlamaanka Kenya gaar ahaan Guddiga Arimaha Dibadda iyo Guddiyada kale ee Joogtada ah ayaa shakay u yeeray Wasiirkooda Arimaha Dibadda si ay wax uga weydiiyaan Xiisadda labada Dowladood oo gaartay meeshii ugu sarreysay. Baarlamaanka Kenya ayaa saacado u qabtay Wasiirka oo safar ka soo gashay dorraad waxayna shalay uga warbixisay Xiisadda taagan iyo dhul badeedka muranka ka taagan ee Xadduuda labada Dowladood.
Dad badan ayaa is weydiinaya Maxeey Baarlamaanka Soomaaliya kala socdaan Khilaafka labada Dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya?
Wali ma jirto wax kulan ah oo ku aadan Xiisadda iyo khilaafka labada Dowladood oo ay Baarlamaanka Soomaaliya ka yeesheen, si lamid ah Kuwa Kenya maadaama waxa laysku haayo ay yihiin masiir umadeed iyo Dhulkii ay u dhaarteen. Sidoo kale Xukuumadda Soomaaliya ayaa Baarlamaanka ka tala gelin go’aanada iyo Xiisadda labada dowladood.
Inkastoo Baarlamaanka Soomaaliya labada Aqalba ay ku jiraan Fasax hadane ma jirto kulamo arintaan khilaafka ku aadan oo Guddiyada ka yeesheen maadaama heerkii ugu sareeyay gaaray Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi, oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kalfadhi u sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in Guddiga Joogtada ah ee Golaha Shacabka ay u yeeraan Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukumadda Soomaaliya, si ay wax uga waydiiyaan Khilaafka soo kala dhax galay labadda dal ee Kiinya iyo Soomaaliya maadaama uu Golaha Shacabka Fasax ku jiro.
“Waxaa fiicaan lahayd in Guddiga Joogtada ah ee Golaha Shacabka ay u yeeraan Wasiirka Arrimaha Dibadda si ay wax ugu waydiiyaan Khilaafka Labada dal” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi. “Waa arin wayn kiiska hadda taagan waana waajib ballaaran oo saaran Baarlamaanka, waa in ay Guddiga joogtada ah u yeeraan Wasiirka oo ay ka ogaadaan halka ay Xaaladda mareyso” ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Axmed Jindi.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaan ka Soomaaliya ayaa qaba aragti ka duwan mida Xildhibaa Jindi. Xildhibaan Daahir ayaa sheegay in aysan muhiim ahayn in xiligaan loo yeero Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya si wax looga waydiiyo Xiisadda ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya.
“Aniga waxaan qabaa in Kiinya Ciidankeeda laga sooro Soomaaliya, ma jirto sabab ay dalkayna usii joogaan rag dagaal iyo dood naga dhaxeeyo”” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi ayaa dhankiisa qaba in aan aad loo sii buun-buunin Khilaafka Labada dal ee Kiinya iyo Soomaaliya, waxa uuna ka digay in lagu fududaado in la eryo Ciidanka Kiinya ee Soomaaliya ku sugan “Ciidanka Kiinya Kuma joogaan Kiinyaan ee waa AMISOM, mana ahan in aan ku fududaano arimahooda, ma qabo in khilaafka halkaasi la gaarsiiyo” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi. “hadii loo baahdo in dalka laga saaro Ciidamada Kenya, waa in aan kala hadalnaa Midowga Afrika ee Kenya waxba kama gasho” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Jindi.
Sanator Axmed Cabdixafiid Bulsho oo ah Xubin katirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaba in Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya uu ka tala galiyo Guddiyadda Arimaha Dibadda ee labada Gole dhamaan tilaabooyinka la xiriira Arimaha Xiisadda Soomaaliya iyo Kenya.
“Dhibaatada hada taagan ee ah Murunka Badda waxaa sababteeda leh, Baarlamaankii hore oo aan laga tala-gelin, hadana kan ma jirto cid ka tala-gelisay waxa socda”ayuu yiri Senator Bulsho oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Sanatar Axmed Cabdixafiid Bulsho, ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya aysan ka tanaasuli doonin Khaqyraad keeda iyo Baddeeda, balse ay cabsi badan jiri karto hadii arrinta sooh dinta laga galo wadda xaajood.
“Waxaan ku talin lahaa in Xukuumadda ay arintaan kala tashato Baarlamaanka iyo cid kasta oo Soomaali ah oo aqoon leh, waa kiis u baahan wadajir”, ayuu yiri Senator Axmed Bulsho.
Khilaafka hadda taagan ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa aragti mid ah ka qaatay dhamaan Umadda Soomaaliyeed ee Mucaarad iyo Muxaafad, Siyaasiinta iyo Xisbiyada dalka ayaa Dowladda ku taageeray go’aankii ay ka qaadatay waxayna soo saareen talooyin wax ku ool ah.
Cabdi Xaashi oo Muqdisho ka furay Shirwaynaha dib u heshiisiinta Qaranka